စိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသားသိပ္ပံ (NIMH): DSM ချို့ယွင်းချက်များနှင့်ခေတ်မမီတော့ဖြစ်ပါတယ်။
ဝေဖန်သူများစိတ်ကျန်းမာရေးသုတေသနများအတွက်လက်တွေ့ကို manual မသင့်တော်သောဟုပြော
အဆိုပါ NIMH DSM-5 များအတွက်ပံ့ပိုးမှုနှုတ်ထွက်: အဆိုပါနောက်ဆုံးပေါ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုယားဖို့အရှက်ရထိုးနှက်သည်။
NIMH: DSM အတွက် Requiem နှင့်၎င်း၏ဝေဖန်သူများ။ မျိုးဆက်သစ် DSM နှင့်ဇီဝဗေဒဆန့်ကျင်ရေးဝေဖန်သူများအားငြင်းပယ်လိမ့်မည်
DSM-5: Arrival ပေါ်တွင် "တစ်ဦးက Living စာရွက်စာတမ်း" သေ?
NIMH, Brilliant မိုက်, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးလား? အပိုင်း (1)
By သောမတ်စ် Insel on ဧပြီလ 29, 2013
အခုအသစ်ကို manual ၏ရည်မှန်းချက်, ရှိသမျှအရင် edition မှာကဲ့သို့ psychopathology ဖော်ပြတစ်ဘုံဘာသာစကားပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ DSM ကိုလယ်များအတွက် "ကျမ်းစာ" အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်နေစဉ်, ကတံဆိပ်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ defining အစုတခုဖန်တီးမှာအကောင်းဆုံး, တစ်ဦးအဘိဓါန်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုထုတ်ဝေ Clinician တူညီတဲ့နည်းလမ်းတူဝေါဟာရများကိုအသုံးပြုရေးအတွက်လုံလောက်ခဲ့ပါသည် - DSM ၏ edition မှာတစ်ခုချင်းစီ၏ခွန်အား "ယုံကြည်စိတ်ချရ" ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအားနည်းချက်တရားဝင်မှု၏၎င်း၏မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးရောဂါ၊ Lymphoma သို့မဟုတ်အေအိုင်ဒီအက်စ်တို့၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များနှင့်မတူသည့်အချက်မှာ DSM ၏ရောဂါလက္ခဏာများသည်လက်တွေ့လက္ခဏာလက္ခဏာများပြန့်ပွားခြင်း၊
ကျန်တဲ့ဆေးတွေမှာရင်ဘတ်နာကျင်မှု (သို့) အဖျားတက်ခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေကိုအခြေခံပြီးရောဂါရှာဖွေရေးစနစ်များကိုဖန်တီးနိုင်ခြင်းနဲ့ညီမျှလိမ့်မယ်။ အမှန်မှာဆေးပညာ၏အခြားဒေသများတွင်အဖြစ်များလေ့ရှိသောလက္ခဏာများကိုအခြေခံသည့်ရောဂါလက္ခဏာများသည်လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်ဝက်အတွင်းအကြီးမားဆုံးအစားထိုးခြင်းခံခဲ့ရပြီးဖြစ်သောကြောင့်ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုတည်းကသာအကောင်းဆုံးကုသမှုကိုညွှန်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသလောက်ဖြစ်သည်။
NIMH အဆိုပါဖြန့်ချိလိုက်ပါတယ် သုတေသနဒိုမိန်းလိုအပ်ချက် (RDoC) အသစ်တစ်ခုကိုခွဲခြား system အတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ကို တင်. မှမျိုးရိုးဗီဇ, ပုံရိပ်, သိမြင်မှုသိပ္ပံ, နှင့်သတင်းအချက်အလက်၏အခြားအဆင့်ဆင့်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ရောဂါအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့စီမံကိန်းကို။ အတိတ် 18 လအတွင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုစီးရီးမှတဆင့်ကျနော်တို့ (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) သစ်တစ်ခု nosology များအတွက်အတော်ကြာအဓိကအမျိုးအစားသတ်မှတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ။ ဤသည်ချဉ်းကပ်အများအပြားယူဆချက်နှင့်အတူစတင်ခဲ့ပြီး:
NIMH ကွာ DSM categories မှ၎င်း၏သုတေသန re-orienting ပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.
ရှေ့ဆက်သွားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစနစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန်လက်ရှိအမျိုးအစားများသို့မဟုတ်လက်ရှိအမျိုးအစားခွဲများကိုခွဲခြားထားသောသုတေသနစီမံကိန်းများကိုပံ့ပိုးပေးလိမ့်မည်။ ဒီလျှောက်ထားသူများအတွက်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများသည်စိတ်ကျဝေဒနာပြင်းထန်သောစိတ်ကျန်းမာရေးစံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောသူများထက်စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးခန်းရှိလူနာအားလုံးကိုလေ့လာနိုင်သည်။ "စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း" အတွက် biomarkers ကိုလေ့လာခြင်းသည်ဤရောဂါလက္ခဏာများ၏နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေကိုနားလည်ရန် anhedonia သို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ဘက်လိုက်မှုသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်နှေးမှုများစွာရှိသည့်ရောဂါများကိုစတင်လေ့လာခြင်းဖြင့်စတင်နိုင်သည်။ ဒီလူနာတွေအတွက်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုသမှုအသစ်များနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကုသမှုများပြုလုပ်ရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသော်လည်းပိုမိုတိကျသောရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးသည့်စနစ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်သာဖြစ်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ခံစားမိသည်။ RDoC ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အကောင်းဆုံးအကြောင်းရင်းမှာပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။
1 စိတ်ကျန်းမာရေး: အရောင်စဉ်တွင်။ အာဒံကိုဃသဘာဝတရား။ 2013 ဧပြီ 25; 496 (7446): 416-8 ။ Doi: 10.1038 / 496416a ။ မရှိနိုင်ပါစိတ္တဇ။ PMID: 23619674
2 အဘယ်ကြောင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကအကြောင်းလုပ်ဖို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဟားဗတ်ဘို့ဤမျှကာလပတ်လုံးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သလဲ Kapur S က, Phillips က AG က, Insel TR ။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012 ဒီဇင်ဘာ; 17 (12): 1174-9 ။ Doi: 10.1038 / mp.2012.105 ။ EPub 2012 သြဂုတ် 7.PMID: 22869033
3 အဆိုပါ Kraepelinian dichotomy - သွား, သွား ... ဒါပေမယ့်မသွားရသေး။ Craddock N ကို, Owen MJ ။ br J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010 ဖေဖော်ဝါရီ; 196 (2): 92-5 ။ Doi: 10.1192 / bjp.bp.109.073429 ။ PMID: 20118450
အပိုဒ်ခွဲ - စိတ်ရောဂါကုသမှုကိုသမ္မာကျမ်းစာကခွဲခြားထားသည်
16: 30 03 မေလ 2013 အားဖြင့် အန်ဒီ Coghlan နှင့် Sara Reardon
ဧည့်သည်အယ်ဒီတာအဖွဲ့: "လက်စွဲစာအုပ်တစ်ခုကအမေရိကန်၏စိတ်ကျန်းမာရေးသုတေသနကိုမဖော်ပြသင့်ပါ"Allen က Frances အားဖြင့်
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစိတ်ကျန်းမာရေးသုတေသနဌာနသည်စိတ်ရောဂါကုသမှု၏သမ္မာကျမ်းစာအသစ်ကိုစွန့်လွှတ်သည်။ အဆိုပါ Diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်, ၎င်း၏တရားဝင်မှုမေးမြန်း နှင့် "စိတ်ရောဂါနှင့်အတူလူနာပိုကောင်းထိုက်" ကြောင်းဖော်ပြ။ ဒီ bombshell ခေါ်လက်စွဲ၏ပဉ္စမတည်းဖြတ်မူထုတ်ဝေမီရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည် DSM-5.
Nationalပြီလ ၂၉ ရက်တွင်အမေရိကန်အမျိုးသားစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာဌာန (NIMH) ၏ဒါရိုက်တာသောမတ်စ်အူဆင်ကလူတစ် ဦး ၏ရောဂါလက္ခဏာများအရစိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါနှင့် schizophrenia စသည့်ရောဂါများကိုခွဲခြားခြင်းမှအဓိကအပြောင်းအလဲကိုထောက်ခံခဲ့သည်။ အဲဒီအစား, Insel စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမမှန်ဖို့လိုသည် မျိုးရိုးဗီဇကို အသုံးပြု. ပိုပြီးဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျရောဂါခံရလှုပ်ရှားမှု၏ပုံမှန်မဟုတ်သောပုံစံများနှင့်သိမြင်မှုစမ်းသပ်ခြင်းပြသသော, ဦးနှောက် Scan ဖတ်။
ဤသည် 60 နှစ်ပေါင်းစိတ်ရောဂါသုတေသန၏အဓိကဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုအမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်းမှထုတ်ဝေသောလက်စွဲစာအုပ်စွန့်ခွာဆိုလိုပေသည်။
အဆိုပါ DSM အငြင်းပွားဖွယ်ရာအတွက်မှအစပြုခဲ့ပြီး နှစ်ပေါင်းအတော်များများသည်။ ဝေဖန်သူများကရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပါပြီ ၎င်း၏အသုံးဝင်မှု outlasted, အမှန်တကယ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများသို့ရောဂါနှင့်ခဲ့ပြီမဟုတ်တိုင်ကြားမှုများလှည့်ထားသည် အထောက်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီများကသြဇာလွှမ်းမိုးမှု သူတို့ရဲ့မူးယစ်ဆေးအသစ်စျေးကွက်ရှာဖွေနေ။
အဲဒီမှာလည်းအများအပြားရောဂါ၏အဓိပ္ပာယ်ကျယ်လာပြီးကြောင်းတိုင်တန်းဖို့ဦးဆောင်ခဲ့ကြပြီ Over-ရောဂါအခြေအနေ ကဲ့သို့ စိတ်ကြွရောဂါ နှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါ.
အခုတော့ Insel ပြောပါတယ် ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင် သူကတစ်ဦးပြီးပြည့်စုံသောအပြောင်းအလဲလိုလားသော NIMH ထုတ်ဝေသော သိပ္ပံအပေါ်အခြေခံပြီး diagnoses မဟုတ်ရောဂါလက္ခဏာ။
“ ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးရောဂါ၊ Lymphoma နှင့်အေအိုင်ဒီအက်စ်တို့၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များနှင့်မတူသည်မှာ DSM ၏ရောဂါလက္ခဏာများသည်လက်တွေ့လက္ခဏာလက္ခဏာများပြန့်ပွားမှုဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုအပေါ်အခြေခံသည်။ “ ကျန်တဲ့ဆေးတွေမှာရင်ဘတ်နာကျင်မှု (သို့) အဖျားရောဂါအပေါ်အခြေခံပြီးရောဂါရှာဖွေရေးစနစ်တွေကိုဖန်တီးတာနဲ့တူတယ်။ ”
Insel သိပ္ပံပညာရှင်များတစ်ဦးတည်းလက္ခဏာတွေခဲကုသမှုရဲ့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုညွှန်ပြကြောင်းလေ့လာသင်ယူကြပါပြီအဖြစ်တခြားနေရာဆေးပညာလက္ခဏာ-based ရောဂါ၏ဤအမျိုးအစားအတိတ်ရာစုနှစ်တစ်ဝက်ကျော်စွန့်ပစ်ခဲ့တာကပြောပါတယ်။
ဇီဝအခြေစိုက်ရောဂါဖို့ပြောင်းကုန်ပြီအရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန်, Insel ပရိုဂရမ်တစ်ခုကခံပြီးတစ်ခုချဉ်းကပ် NIMH ပုကိုခေါ်မှာ 18 months ago စတင်နှာ သုတေသနဒိုမိန်းလိုအပ်ချက်စီမံကိန်းအတွက်.
အဆိုပါချဉ်းကပ်စိတ်ရောဂါသိမှတ်ခံစားမှု, စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အပြုအမူ၏တိကျသောပုံစံများ dictate ကြောင့်ဦးနှောက်ကိုဆားကစ်ပါဝင်သောဇီဝပြဿနာများဖြစ်ကြောင်းအယူအဆကိုအပေါ်အခြေခံသည်။ ဒီပြဿနာတွေကိုကုသအပေါ်ကိုအာရုံထက်လက္ခဏာတွေလူနာတွေအတွက်ပိုကောင်းတဲ့အလားအလာများကိုမျှော်လင့်နေသည်။
“ ငါတို့သုံးမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး DSM အမျိုးအစားများကိုရွှေစံအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ထို့ကြောင့် NIMH သည်၎င်း၏သုတေသနကိုဝေးကွာသွားစေလိမ့်မည် DSM အမျိုးအစားများ, "Insel ကပြောပါတယ်။
ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထင်ရှားတဲ့စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန် New Scientist မဂ္ဂဇင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် Insel ၏ရဲရင့်သောအစပြုမှုကိုထောက်ခံသည်။ သို့သော်သူတို့ကပြောကြားသည်မှာ Insel ၏ရူပါရုံကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အချိန်ယူရခြင်းမှာရောဂါလက္ခဏာများအပေါ်တွင် မူတည်၍ ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့်ကုသခြင်းတို့ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်ဟုဆိုကြသည်။
Insel ကသူအကြံပြုသောအချက်သည်အချိန်ယူရလိမ့်မည်၊ အနည်းဆုံးဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်ကင်ဆာရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်ကုသမှုကိုပြောင်းလဲစေသည့်“ တိကျမှန်ကန်သောဆေးဝါး” ကိုပို့ဆောင်ရန်ပထမခြေလှမ်းအဖြစ်ရှုမြင်သည်။
ဂိမ်းကစားခြင်းကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သော်လည်းစိတ်ချရသောအခြေခံသိပ္ပံကိုအခြေခံရမည် ရှိမုနျကို Wessely King's College London ရှိစိတ်ရောဂါကုသမှုဌာန၏။ "ဒါဟာအနာဂတ်အတွက်မဟုတ်ဘဲအနာဂတ်အတွက်ပဲဖြစ်ပေမယ့်ရောဂါရဲ့မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ရောဂါရဲ့နားလည်မှုကိုတိုးတက်စေတဲ့အရာက (ရောဂါလက္ခဏာကိုအခြေခံတဲ့ရောဂါထက်) ပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ "
များအတွက်စိတ္တအလုပ်လုပ်ကိုင်အုပ်စုတစ်စုအပေါ်သူကာဒစ်ဖ်တက္ကသိုလ်မိုက်ကယ် Owen, DSM-5သဘောတူသည် "သုတေသနသည်လက်ရှိရောဂါအမျိုးအစားအမျိုးအစားများ၏ကျဉ်းမြောင်းသောပိတ်ဆို့မှုမှထွက်ရန်လိုအပ်သည်" ဟုသူကဆိုသည်။ သို့သော် Wessely ကဲ့သို့သူကလက်ရှိအမျိုးအစားများကိုစွန့်ပစ်ရန်စောလွန်းသေးသည်ဟုဆိုသည်။
“ ဒါတွေဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်ရှုပ်ထွေးတဲ့ရောဂါတွေဖြစ်တယ်။ အာရုံကြောသိပ္ပံကိုလုံလောက်သောနက်နက်နဲနဲနားလည်ရန်ရောဂါရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်တည်ဆောက်ရန်အချိန်များစွာကြာလိမ့်မည်။ သို့သော်အတောအတွင်းဆရာ ၀ န်များအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏အလုပ်ကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လိုအပ်သည်။
အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်မှဒေးဗစ်ကလာ့ခ်ကလက်ရှိ NIMH သည်သိပ္ပံဆိုင်ရာအခြေခံရောဂါရှာဖွေခြင်းကိုလက်ရှိရောဂါအမျိုးအစားများအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးနေသည်ကိုသူ ၀ မ်းသာကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူက“ လူနာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့နည်းနည်းလေးမှဖြစ်နိုင်ပြီးသက်သေပြဖို့လိုလိမ့်မယ်။
အဆိုပါအငြင်းပွားဖွယ်ရာအခါလာမယ့်လမှာပိုလူသိရှင်ကြားမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုဖွယ်ရှိသည် American Psychiatric Association ဘယ်မှာ, San Francisco မှာ၎င်း၏နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကိုရရှိထားသူ DSM-5 တရားဝင်စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ Institute မှတစ်ဦးရရှိထားသူတဲ့အခါမှာဖြန့်ချိခြင်း, ဇွန်လထဲမှာလန်ဒန်မှာရှိတဲ့လိမ့်မည် နှစ်ရက်ကြာအစည်းအဝေး အဆိုပါ DSM ပေါ်မှာ။
စွဲ Neuroclinical အကဲဖြတ်: စွဲခြင်းရောဂါများအတွက်တစ်ဦးကအာရုံကြောသိပ္ပံ-အခြေခံပြီးမူဘောင် (2015)
DSM V ကိုနှိုင်းယှဉ်သုတေသနဒိုမိန်းလိုအပ်ချက်: ဘယ်လိုဒီစကားစစ်ထိုးပွဲတိရိစ္ဆာန်များအတွက် corticostriatal ကမောက်ကမဖြစ်မှုပုံစံကြိုးစားမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသနည်း (2016)